Njikọ ụgbọ elu dị n'etiti Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain na Egypt: Qatar Airways na nsogbu?
Location: Mbido » Ịdee » Airlines » Njikọ ụgbọ elu dị n'etiti Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain na Egypt: Qatar Airways na nsogbu?
Ọnọdụ mgbasa ozi na-agbasa na nnukwu nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke udo maka ụgbọelu mba na-aga n'ihu na Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain na Egypt. Mba na-ebo Qatar ebubo na ịkwado iyi ọha egwu na ịrọ òtù.
E jidere ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke Qatar n'izu gara aga, nke na-esote ya site na nkwupụta ụgha na-akatọ amụma mba ofesi US nke edepụtara na weebụsaịtị ya ma kwuo na onye isi Qatar. Ugbu a, ọtụtụ ozi ịntanetị nke ndị nnọchi anya United Arab Emirates na US agbaala.
Ha na-ekpughe nhazi dị n'etiti onye nnọchi anya na onye isi na-eche echiche na Israel na Washington DC.
Dabere na akụkọ ozi sitere n'aka ndị Iran Press TV Saudi Arabia, UAE, Bahrain, na Egypt bepụlarị mmekọrịta mba na mba na kọntaktị niile nke ala na ikuku na Qatar, na-ebo mba mba Peshia ebubo na ọ na-akwado iyi ọha egwu ma na-etinye aka n'ihe omume ha.
Qatar Airways na asọmpi siri ike ya na Emirates na Etihad Airways nke UAE ma na-enye ụgbọ elu ugboro ugboro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla n'etiti Qatar na UAE.
eTN ruru ndị niile dị irè aka maka nkọwa ma melite.
Ọzọkwa Saudi steeti ụlọ ọrụ mgbasa ozi, na-ezo aka na isi mmalite, kwuru na Monday Riyadh "na-agba ume ka ụmụnne niile mba na ụlọ ọrụ na-eme otu ihe ahụ."
Alaeze ahụ kwuru na ya mere mkpebi a, “na-esite na nnwere onwe nke ikike ya dị oke mkpa nke iwu mba ụwa kwadoro na nchedo nchebe obodo site na ihe egwu nke iyi ọha egwu na extremism.”
Saudi Arabia kwuru na mbugharị a dị mkpa iji kpuchido alaeze ahụ site na ihe ọ kọwara dịka iyi ọha egwu na oke egwu. Alaeze ahụ dọpụkwara ndị agha Qatar niile n’agha na-aga n’ihu na Yemen.
Mkpebi a mere ka Qatar buputara na ngwụcha ọnwa Mee na ndị omekome ahụ weghaara saịtị nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke obodo ma bipụta ihe ọ kpọrọ okwu adịgboroja site n'aka onye ọchịchị na-achị ya gbasara Iran na Israel. Ndị agbata obi ya nọ na Gulf Arab zara iwe, na-egbochi mgbasa ozi sitere na Qatar, tinyere ụlọ ọrụ mgbasa ozi Satellite nke Al-Jazeera.
Mịnịstrị na-ahụ maka okwu mba ofesi Bahrain wepụtara nkwupụta n'isi ụtụtụ Mọnde na-ekwu na ọ ga-ewepu ọrụ nnọchi anya ya na isi obodo Qatar na Doha n'ime elekere 48 na ndị nnọchi anya Qatar niile kwesịrị ịhapụ Bahrain n'otu oge ahụ.
Nkwupụta nke mịnịstrị ahụ kwuru na ụmụ amaala Qatar ga-ahapụ Bahrain n’ime izu abụọ, na ụgbọ elu na oke osimiri ga-akwụsị n’etiti mba abụọ a. Amabeghị ozugbo nke ahụ ga-emetụta Qatar Airways, otu n'ime ndị isi ụgbọ mmiri na-ebu ogologo oge.
Bahrain tara Qatar “mkpasu iwe nke mgbasa ozi, nkwado maka ngwa ọgụ ndị na-eyi ọha egwu na ego jikọrọ ndị otu Iran iji mebie ọgbaghara na ịgbasa ọgbaghara na Bahrain” maka mkpebi ya.
Agencylọ ọrụ mgbasa ozi ala nke UAE WAM kwuru na ndị Emirates bepụrụ njikọ ma nye ndị nnọchi anya gọọmentị awa 48 ịhapụ mba ahụ, na-ekwu maka "nkwado ha, itinye ego na ịnabata ndị na-eyi ọha egwu, ndị otu mgbagha na ịrọ òtù".
Egypt mara ọkwa mmechi nke ọdụ ụgbọ elu ya na ọdụ ụgbọ mmiri maka njem niile nke Qatar iji kpuchido nchekwa obodo ya.
Egypt belata njikọ na Qatar, na-ebo mba Gulf Arab ebubo na ha na-akwado ndị otu "iyi ọha egwu" gụnyere Brothertù Muslimmụnna Alakụba, ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke Egypt kwuru.
Egypt kwuru na Qatar na-akwado echiche nke Al-Qaeda na ISIS ma na-akwado iyi ọha egwu na Saịnaị.
Mgbasa ụgbọ elu Kangaroo Island na-adọta ụgbọ elu
Southwest Airlines: Akụkọ si Cincinnati, Northern Kentucky, Grand Caymon, Fort Lauderdale, Denver na Nashville
St. Regis San Francisco na-ahọpụta onye isi nri ọhụrụ ...
Ụgbọ elu New Belfast City gaa Birmingham na Flybe ebidola
Ukraine tiri mkpu na Marriott, Hilton, IHG, Accor, Ikuku...
Tie mkpu maka Ukraine!!! Ivan Liptuga, ihu ọhụrụ nke ...
Iju mmiri 'a na-enwetụbeghị ụdị ya' gburu mmadụ 341 na South Africa
SKAL Bangkok nwere onye isi ala ọhụrụ: James Thurlby
Ọgwụ mgbochi ọhụrụ maka ọrịa Alzheimer...
A na-eme atụmatụ ahịa igwe na-agbanwe akwụkwọ mpempe akwụkwọ...
Canada Jetlines kpọrọ onye isi ọrụ ọhụrụ aha
Air France-KLM nyere iwu ụgbọ elu Airbus A350F anọ ọhụrụ
Ụzọ ọhụrụ iji gbampụ ọrịa butere ụlọ ọgwụ
Onye isi ala Biden, onye na-eme ihe nkiri Morgan Freeman n'etiti 936…
Ndị ọrụ njem nlegharị anya India nwere obi ụtọ maka nlọghachi nke mba ụwa…